Tetikasa Vaovao ao Meksika Iadiana amin’ny Kolikoly amin’ny Alalan’ny Boky Tantara An-Tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2017 5:23 GMT
Sarin'ny boky tantara an-tsary iadiana amin'ny kolikoly, avy amin'ny mpisera @AlexPulidoG nasehony ho an'ny mpiseran'ny Twitter.
Miteraka famoronan-kevitra isan-karazany ny ady amin'ny kolikoly ao Meksika. Ato amin'ny Global Voices izahay miezaka ny manolotra ireo tena miavaka, toy ny fananganana vondrona mpihevi-draharaha na fanovozan-kevitra miompana amin'izany lohahevitra izany, ka tonga hatramin'ny fanentanana olom-pirenena antsoina hoe #JitomatazoMx izay manana mikendry ireo mpanolikoly ao amin'ny saranga politika.
Fa amin'ity indray mitoraka ity indray izahay miresaka boky tantara an-tsary iray izay navoakan'ny laboratoaran'ny politikam-bahoaka Ethos izay nivoaka tamin'ny fiandohan'ny volana marsa 2017 antsoina hoe El libro anticorrupción [boky miady amin'ny kolikoly] ary aely amin'ny anarana El libro vaquero anticorrupción. [Bokin'ny mpiandry omby miady amin'ny kolikoly], sanganasa mitantara ny ahafahan'ny olom-pirenena misoroka tsy ho tratran'ny kolikoly eo amin'ny fiainana andavanandrony. Ny endrika nomerika navoakan'ny Ethos dia ahitana kirakiram-peo sy sary mihoatra noho izay hita mahazatra rehefa mamaky tantara an-tsary.
Ny asan'ny Ethos dia miainga avy amin'ny El libro vaquero [ilay bokin'ny mpiandry omby] izay natonta sy naely nanerana an'i Meksika hatramin'ny fanombohan'ny taompolo fitopolo ary mamoaka tantara mitohy voafaritra ho avy amin'ny “Far West” [Andrefana Lavitra] tamin'ny faran'ny taonjato faha-19.
Nitatitra tsara ny fanombohan'ny asa ny vavahadin-tseraserra Animal Político:
Ho fampahafantarana sy ho fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena hisoroka sy hitory trangan-kolikoly, dia manolotra ny Bokin'ny Mpiandry Omby miady amin'ny kolikoly ny laboratoara Ethos amin'ny alarobia voalohany marsa ho avy izao.
Ao anatin'ireo pejin'ny Mpiandry Omby Miady amin'ny Kolikoly ny mpamaky no hahita ireo tantara natao hampahafantatra, amin'ny fiteny mahazatra, ny olana ateraky ny kolikoly sy hanazava ny fomba fiasan'ny Rafitra Nasionaly iadiana amin'ny Kolikoly.
Ny Rafi-Pirenena Miady amin'ny Kolikoly dia tambajotra iray iarahan'ny sampan-draharaham-panjakana (efa mijoro ny sasany, mbola atsangana kosa ny hafa) mirotsaka amin'ny fisorohana, fitsapana ary fanasaziana ireo fomban-kolikoly ataon'ny mpiasa any amin'ny sampan-draharaham-panjakana meksikana. Nambara tamin'ny mey 2015 ny fananganana azy.
Raha miresaka ny isan'ny boky ôrizinalin'ny El libro vaquero mivoaka isaky ny fotoanany, dia mizara izany tantara manaraka izao ny vavahadin-tserasera Ethos :
Nanomboka tamin'ny taona 1978 ny Livre Vaquero [Bokin'ny Mpiandry Omby], ary nahavoaka hatramin'ny 118.000 isa isaky ny tapa-bolana. Hifototra amin'ny tantaran'ady amin'ny kolikoly izany isa izany amin'ny fivoahana manaraka. Hisy bokin-tantara an-tsary miady amin'ny kolikoly miisa 20.000 koa hozaraina eny amin'ny seha-bahoaka sy ny oniversite noho ny fanampian'ny fiarahamonim-pirenena.
Miarahaba ny fivoahan'ny boky ny mpisera Twitter, tahaka an'i Antonio T. Carreño:
Adidin'ny rehetra ny ady amin'ny kolikoly. Ampirisihana ny famakiana ny bokin'ny Mpiandy Omby avoakan'ny Ethos
Nizara ity sary manaraka ity i Alejandro Pulido G.:
Manatevin-daharana ny ady amin'ny kolikoly ny bokin'ny Mpiandry Omby
Tantara an-tsary: https://t.co/huzD8r1qwM pic.twitter.com/298OWewg3a
Nizara izao hafatra manaraka izao kosa i José Luis Chicoma, Tale Jeneralin'ny Ethos:
Ny bokintsika ahitana mpiandry omby miady amin'ny kolikoly. Ahitana tantaram-panitsakitsahana sy firaisana tsikombakomba.
Azo jerena maimaim-poana ankoatra ny vidin-tserasera ao amin'ny vavahadin-tseraseran'ny Ethos ny sangan'asa iray manontolo.